सिताराम कट्टेल, धुर्मुस रंगशाला बनाउने अ’भियानमा मेचीमहाकाली हिन्दै गर्दा नेपाल प्र’हरीले भ्यानमा राखेर सम्मानको साथ ५ घन्टा संगै हिने! भिडियो सहित:: Mero Desh
Published on: १५ चैत्र २०७७, आईतवार ०८:१४
काठमाडौं! चर्चित कलाकार धुर्मुस सिताराम कट्टेलले मेची महाकाली अभियान सिंगो देशलाई जोड्ने अभियान हो एकताको अभियान हो,गौरव साथ सबै जुटौं भन्दै सबैलाई आव्हान गरेका छन् ।हाल रंगशालामा प्रा’बिधिक बेक्ती हरु लाई छोडेर धुर्मुस मेचीमहाकाली अभियानमा पैसा संकल न गर्न अर्जुन भुसाल पाण्डे लगायत अन्य अभियन्ता हरु गौतमबुद्व अन्तरास्ट्रिय क्रीकेट रंगशाला सम्पन्न गराउनै पर्दछ भन्ने मनसायले मेचीमहाकाली अभियानमा लागि पर्नु भएको छ
यो अभियानमा सबैले साथ र समर्थन गर्दै सहयोग गर्दै आएको पाईएको छ । धुर्मुसले थप प्रष्ट्याउदै सामाजिक संजालमा लेखेका छन् चैत १० गतेबाट सुरु भएको हाम्रो मेची महाकाली अभियानको आज चोथौ दिन हामी कैला लीमा आइपुगेका छौं । महाकाली नदी पारिको हाम्रो भूमि दोधारा चाँदनीबाट सुरु भएको हाम्रो अभियानमा कन्चन पुरबासी मनकारी ब्यक्तित्वहरुले गर्नुभएको सहयोग सद्भा वले हामी निकै हर्षित भएका छौं । यो अभियान सिंगो देश लाई जोड्ने अभियान हो । एकताको अभियान हो ।
रंगशाला मात्रै नभएर राष्ट्रिय एकताको प्रतिबिम्ब ठडिइरहे को हुनाले हामीले पिच निर्माणमा महाकाली नदीको माटो र सिमा स्तम्भमा रहेको माटो ग्रहण गरेका छौं । यसरी नै पुर्व मेची नदी र सिमाको माटो र भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको माटो गरी तीन वटै ठाउँको माटो अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानको सातवटा पिचमा सम्माहित गरी राष्ट्रिय एकताको सन्देश सहितको राष्ट्रिय गौरबको रंगशा ला निर्माण सम्पन्न गर्ने हाम्रो चाहाना समग्र तीनकरोड नेपा लीको चाहाना अनि सपना हो ।
सोहि अनुरुप हामी यहाँहरुको घर दैलोमा मनसँग मन जोड्न भावना जोड्न आइरहेका छौं । कन्चनपुरको यात्रा मा हामीलाई साथ सहयोग समर्थन गर्नुहुने सम्पुर्ण कन्चन पुरबासी आदरणीय मनकारी ब्यक्तित्वहरुमा धन्यवाद एवं आभार ब्यक्त गर्दछौं ! कन्चनपुरको जस्तै कैलालीको अभि यान पनि सार्थक बन्नेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै सम्पुर्ण सहयोगी मन, सुभेच्छुक एवं शुभ चिन्तक ज्यू र अभि यान्ता ज्यूहरुलाई अभियानमा जोडिनका लागी पनि अनु रोध गर्दै हामीसँग जोडिनका लागी इच्छुक ब्यक्ति, संघ संस्था एवं सहयोगी मनका लागी ९८१२२०७४८९ मा सम्प र्क गर्न सक्नुहुनेछ ।
“बि’रोध समर्थन आफ्नो ठाउमा छ , तर तारा बराल दिदी ले रंगशालामा खु’लेआम ब’म पड्काउॅछु भन्दै हिॅड्नु कति को जायज हो? सरकारी जग्गामा धुर्मुसले रंग’शाला बनाए भन्नेले नेता प्रधानमन्त्री र भू’माफियाले दिन’दहाडै क’ब्जा गरेका सरकारी जमिनको खो’जी गर्नु पर्दैन ? जे भए नि च’न्दै मागेर भए नि धुर्मुस्ले बिगार्ने, भत्काउने र बि’ध्वंस म’च्चाउने काम गरेका त छैनन् नि । नि’र्माणकै काम गरेका छन्! तपा’ईको रिस ई’बि प्रचण्ड र रेणुसंग होला , त्यो आफ्नो ठाउॅमा होला !
यो पनि,,नेपाल यस्तो भूगोल हो जहॅा कतिखेर कस्को मति भ्रस्ट हुन्छ थाहै हुन्न । नेतादेखि ज’नतासम्म यहॅा प्राय डर लाग्दा मान्छेहरु मात्रै छन् । आज तपाईको पछि लाग्नेहरु भोलि अर्कैको पछि लाग्छन् । आज तपाईको गीत गाउने हरु भोलि अर्कैको सुरतालमा नाच्न थाल्छन् । आज तपाई को रक्षाको लागि खुकुरी बोक्नेहरु भोलि त्यहि खुकुरी लि एर तपाईलाई काट्न आउॅछन्।
किनकि यहॅा बिचारको बिचलन छ, यहॅा बिश्वासको खडेरी छ, यहॅा चेतनाको भोकमरी छ, य’हॅा तपाईंले केहि राम्रो गर्न एक कदम अघि सर्नु भो भने तपाईको खुट्टा दश कदम पछाडि तान्न बिभिन्न अनुहारका मान्छेहरुको राता’रात देश बिदेशबाट नेक्सस तयार भैसक्छ अरु देशमा राम्रो गर्नेलाई इ’ज्जत गरिन्छ भने यहॅा राम्रो गर्छु भन्नेलाई जबर्जस्ती दबा उन लागि पर्छन् मान्छेहरु।एक सय रुपैयाको हरि’यो नोट मा मान्छे बिक्ने देश हो यो। आज तपाईको बिचारको झो ला बोक्नेहरु भोलि कसैको पैसाको झोला बोक्न तयार हुन्छन् यहॅा।
यो पनि गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा आर्थिक अभाव भए पछि मे’चीमहाकालीको महाअभियान लिएर धुर्मुससुन्तली हिडेका छन र उनिहरुलाई कर्मचारीहरुले विदाई गर्दाको भावुक क्षणको तस्विरहरु पनि अहिले सञ्जालमा आईरहेका छन । देशको एक कलाकारले गर्न लागेको यो अभियानमा विभिन्न बाधाहरु भोग्न परेको कुरा समय समयमा धुर्मुसले भन्दै आएका छन। उनिहरु म’हा अभियानको यात्रा तय गर्दै गर्दा फेरि ठगि भयो भन्दै विरोध गर्दै तारा बराल मिडियामा आएकी छिन र उनको अभियान पनि धुर्मुसलाई रङ्गशाला बनाउन नदिने नै स्पष्ट छ!